प्रेमलाई कसरी सफल बनाउने र प्रेम सम्बन्धमा आउने अड्चनहरूको समाधान कसरी गर्ने – News Dainik
प्रेमलाई कसरी सफल बनाउने र प्रेम सम्बन्धमा आउने अड्चनहरूको समाधान कसरी गर्ने
news २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १४:५५ विविध प्रतिकृया दिनुहॊस
प्रेमबाट कोही पनि अछुतो छैन र प्रेमले प्रभाव नगरेको ठाऊ पनि छैन । विश्वव्यापि रुपमा विगतदेखि भविष्यसम्म प्रेमको बारेमा वैचारिक बहस जारी छ ।
प्रेम स्वभाविक स्थिति हो र पनि कतिलाई प्रेमले तनाब पनि दिइरहेको छ । प्रेमको नाममा कतिपय मान्छे धोखामा परिरहेको छ भने प्रेमकै कारण कतिपय ठाऊँहरुमा विभिन्न खालका दुर्घटना पनि निम्तिरहेको छ ।
प्रेमले सुख दिनपर्ने ठाऊँमा प्रेमले कतिलाई झन दुःख पनि दिइरहेको छ । प्रेमलाई कसरी सफल गराउने भन्ने सवाल पनि तड्कारो भएर उठिरहेको छ ।
नयाँ पीँडी प्रेमको व्यवहारमा बढी क्रेजी भइरहेको छ र कतिपया अवस्थामा प्रेममा फस्नुभन्दा पहिला विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरुमा विचार पुर्याउन नसक्दा विभिन्न जटिलताहरूपनि आइरहेका छन् यसै सन्दर्भमा वास्तविक प्रेम के हो ? र यसलाई कसरी सफल गराउने ? सफल प्रेमसम्बन्धको लागि प्रेम गर्नुभन्दा पहिला ध्यान दिन पर्ने कुराहरूके के हुन् ? भन्ने लगायतका प्रेमसँग सम्बन्धित विषयमा महत्तवपूर्ण एउटा सामाग्री यहाँहरुको लागि प्रस्तुत गरिएको छ । सम्बन्धित एवं जिज्ञाशु सबैले हेरेर जानकारी लिनसक्नु हुनेछ । जसको लागि तलको भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोला।
अघिल्लॊ सिटिजन्स बैंकद्वारा पोखरामा सि.सि.टि.भी. जडान गर्न रू ७५हजारको आर्थिक सहयोग
पछिल्लॊ कामना सेवाको कल सेन्टर सञ्चालनमा
पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीको डिभोर्स ! किन गरिन् उनीले यस्ताे निर्णय ?
काठमाडौँ । पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी र चर्चित सञ्चारकर्मी जीपी तिमिल्सिनाको वैवाहिक सम्बन्ध डिभोर्सको …